Naya Post Nepal | भाइरल बाजेलाई २ करोड उप’हार.. कसले दियो?(हेर्नुस् भिडियो सहित )
भाइरल बाजेलाई २ करोड उप’हार.. कसले दियो?(हेर्नुस् भिडियो सहित )
Viral बाजेलाई २ करोड उपहार.. कसले दियो?? हेर्नुहाेस् भिडियाे….
यो पनि ,,हेटौंडा, १८ वैशाख-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी श र्मा ओलीले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन लुतो भएको बताएका छन् । आइतबार एमाले मकवानपुरले आयोजना गरेको आमस भालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिलेको गठबन्धन शरीरमा आ उने लु’तो जस्तै भएको ब’ताएका हुन् ।
‘लुतो धेरै ठूलो घाउ त हैन तर जताततै चिलाइरहन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन पनि त्यस्तै हो, काम गर्दैन ओली र एमालेलाई गाली मात्रै गरिरहन्छ ।’ उनले अहिलेको सरकार खान जन्मिएको आरोप पनि लगाए ।
‘अहिलेको सरकारले देशको ढुकुटी मात्र रित्याएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेको सरकार हुँदा सात ओटा मन्त्रालयले विकास गरिरहेको थियो । अहिलेको सरकार आउने बित्तिकै १८ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको छ ।
’ गठबन्धनले स्थानीय तहको नि”र्वाचन हुन नदिन धेरै ष”ड्यन्त्र रचेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले फागुन महिनाभित्रै स्थानी य तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो, गठबन्धन अहिले पनि चुना व बिथोल्न लागिपरेको छ ।’
‘गठबन्धन बाध्यताले चुनावमा सहभागी भएको छ । चुनाव गराउन बाध्य भएको छ । अहिले पनि चुनाव बिथोल्न खोजि रहेको छ’, ओलीले भने, ‘यदि लायक सरकार हुन्थ्यो भने फा गुनभित्रै यो चुनाव सम्पन्न भैसक्नुपथ्र्यो ।’ सरकारले कमिस नको लागि अहिले चुनावको मुखमा अरबौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिरहेको आ”रोप लगाए ।
‘मन्त्रीको सिक्रीले धेरैलाई बाँधेर राखेकोले त्यही पार्टीमा बसि रहेका छन् । नत्र पार्टी प्रवेश गर्न आइसक्थे’, ओलीले भने ‘फु टेर गएको पार्टीको नाम एकीकृत भन्न थाले । कांग्रेसको पछि लाग्नेको नाम समाजवादी पार्टी रे ।’
एमाले मकवानपुर अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भए को कार्यक्रममा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य डोरमणि पौडेल, मकवानपुर इन्चार्ज रामेश्वर राना, हेटौंडाको
मेयर पदका उम्मेदवार अनन्त पौडेल, उपमेयर पदका उम्मेदवार सुमित्रा काफ्ले लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर र स्वतन्त्र रहेका व्यक्तिहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
२०७९ बैशाख १९, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 1762 Views